मध्यरातमा रंगेहात नायिका मलिनाको मस्ती, फिल्म फ्लप तर क्लब सम्म छुटिएन जोडीFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
मध्यरातमा रंगेहात नायिका मलिनाको मस्ती, फिल्म फ्लप तर क्लब सम्म छुटिएन जोडी
फिल्मी फण्डा । ‘ऋतु’ फिल्मबाट रजटपटमा भित्रिएकी नायिका हुन् मलिना जोशी । पूर्व मिस नेपाल समेत रहेकी मलिनाले ‘ऋतु’ देखी रानी सम्म झन्दै आधा दर्जन फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । मलिना जति मिस नेपाल हुँदा चर्चामा थिईन् अहिले नायिका हुँदा उनको चर्चा त्यति नै सेलाउँदै गएको छ । हुन त मलिनाले पहिलो फिल्मबाटनै असफलता व्यहोर्नु पर्यो ।
अष्ट्रलियामा छायांकन गरिएको फिल्म ‘द विनर’ले पनि नेपालमा प्रचारको पैसा पनि असुल्न सकेन । पहिलो र दोश्रो फिल्म नै यस्तो भएपछि मलिनाको आशा त्यतिखेरै सकेको थियो । तर मिस नेपाल भएकै कारण उनलाई फिल्ममा लिन केही निर्माता ईच्छुक नै देखिए । त्यसपछि उनले फिल्म ‘लिला’, ‘संरक्षण’ र ‘रानी’ लगायतमा काम गरेकी हुन् । लगातार यी सबै फिल्मले पानी पनि माग्न पाएन । त्यसपछि मलिनाको करिअर धरापमा परेको हो । अहिले फिल्म फ्लप हुन थालेपछि नायिका मलिनालाई डिस्कोथेक र क्लवहरुमा देखिन थालेकी छिन् ।
अनुप विक्रम शाहीसँग प्रेममा रहेकी मलिनाले हालै मात्र अनुपसँग ब्रेकअप गरेकी थिईन् । तर उनी अहिले झनै मस्तीमा व्यस्त भएकी छिन् । यो कुनै रिलको कुरा हैन । रियल रुपमै फिल्मी फण्डाले नायिका मलिना जोशीलाई मध्यरातमा राजधानीको एउटा क्लवमा फेला पर्यो । उनी सुपरफ्लप भएको फिल्म ‘रानी’का दुई नायक शारुख ताम्राकार र मनिष श्रेष्ठको साथमा देखिएकी थिईन् । यी तिनै कलाकार अभिनित फिल्म ‘रानी’ त फ्लप भयो तर सम्बन्ध भने हिट भईरहेको हामीले मध्यरातमा मेसो पायौं । केही रुपमा नशा चढेकी मलिनालाई हामीले शारुखसँग नाचिरहेको र बेला बेलामा अंकमालसँगै चुम्मा चुम्बन गरेको समेत पायौं । हामीले उक्त दृश्यलाई क्यामरामा कैद गर्न खोज्दा खोज्दै सकेनौ । कहिले उनले लतमै कसैले हेरिरहेका छन् या खिचीरहेका छन् की भने नजरअन्दाज पनि गर्थे । तर केही तस्वीर भने हामीले लिन सफल भयौं । चुम्बन र अंकमालको फोटो हामीले कैद गर्न सकिनौं ।
उनी लगातार शारुखसँग अंकमालसँगै नाचिरहे । सँगै मनिष पनि थिए तर मनिषसँग उनको कुनै त्यस्तो अवस्था देखिएन, जुन शारुखसँग देखियो । यस कारण कतै मलिनाको शारुखसँग वास्तविक प्रेम हो या फिल्म फ्लप पछिको डिप्रशेनले रोमान्स मात्र हो बुझ्न सकिएन । पछिल्ला समय केही कलाकारहरु आफ्नो फिल्म फ्लप भएपछि कोही डिप्रेशनमा जाने त कोही पेशा परिवर्तन गर्ने या सँगसँगै अन्य कामहरु गर्ने गरिरहेका छन् । कतै यी मध्ये मलिनाको पनि एक त हैन ? त्यो उनैलाई थाहा होला । हुन त मलिनाको व्यक्तिगत जीवन पनि छ । उनलाई पनि आम मानिसले झै मनोरञ्जन गर्ने, घुम्ने, नाच्ने अधिकार छ । तर सेलिब्रेटी भईसकेपछि उनीमाथी सबैको नजर हुन्छ भने उनले नबुझेका हुन् या बुझ पचाएका हुन् । जे होस् मध्यरातमा सार्वजनिक स्थलमा यसरी देखिनु गलत थियो ।
पहिलेको यो भिडियो पनि हेर्नुहोस ।